Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Khamiis Ah 5 May
HomeWarka Xiisaha LehWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta oo Khamiis Ah 5 May
May 5, 2022 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Barcelona ayaa sare u qaaday dalabka ay ku doonayso inay ku soo xerogeliso xiddiga garabka uga ciyaara Brazil Raphinha, oo 25 jir ah, waxayna diyaar u yihiin inay bixiyaan heshiisyo kala duwan oo ku xidhan haddii Leeds United ay sii joogi doonto Premier League xilli ciyaareedkan. (Telegraph)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ingariiska Jesse Lingard, 29, ayaa xiiso ka helaya Juventus , Paris Saint-Germain , AC Milan iyo Newcastle isagoo isku diyaarinaya inuu ka tago Manchester United 22 sano ka dib. (DailyMail)
Garabka Crystal Palace iyo Ivory Coast Wilfried Zaha, 29, uma badna inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda, waxaana laga yaabaa in la iibiyo xagaaga sababtoo ah qandaraaskiisu wuxuu dhacayaa 2023 .
Barcelona ayaan wax niyad ah u haynin inay bixiso 30 milyan oo euros (£25.3m) oo dookh ah si ay 26 jirka garabka uga ciyaara ee Spain Adama Traore amaah ugu beddelato Wolves heshiis joogto ah, waxaanay kaliya xiisaynaysaa ciyaartoy isku beddelasho ah. (Fabrizio Romano)
Arsenal ayaa xiiseyneysa saxiixa weeraryahanka Inter Milan iyo xulka Argentina Lautaro Martinez, inkastoo wakiilka 24 sanno jirkaan uu sheegay in ciyaaryahanka “uusan ka fekereynin” inuu ka tago kooxdiisa haatan. (Goal)
Gunners ayaa sidoo kale xiiseyneysa saxiixa 22 jirka garabka uga ciyaara Bayer Leverkusen ee Moussa Diaby. (SportBILD)
Borussia Monchengladbach iyo daafaca dhexe ee Jarmalka Matthias Ginter, oo 28 jir ah, ayaa diiday inuu xagaaga u dhaqaaqo Aston Villa , bedelkeedana wuxuu ku biiri doonaa Freiburg . (Insider)
Qiimaha suuqa ee weeraryahanka Manchester United iyo England Marcus Rashford, kaasoo lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo Arsenal iyo Newcastle , ayaa hoos u dhacay 90 milyan ginni tan iyo bilowgii 2021. (Express).
Newcastle ayaa loo soo bandhigay fursad ay kula soo saxiixan karto weeraryahanka Watford iyo Senegal Ismaila Sarr, iyadoo Hornets ay 24 sanno jirkaan ku dooneyso 40 milyan ginni. (Footballtransfer)
Liverpool ayaa isha ku haysa Aberdeen iyo Scotland ee 21 jirada daafaca midig ee Calvin Ramsay oo 18 jir ah (Liverpool Echo).
Brighton ayaa xiiso u qabta daafaca khadka dhexe ee kooxda Coventry City iyo xulka Holland Gustavo Hamer, oo 24 jir ah .
West Ham ayaa halis ugu jirta inay weyso saxiixa Sparta Prague iyo Czech Republic Adam Hlozek, oo 19 jir ah, inkastoo loo soo bandhigay fursad ay amaah ku keeni karaan xagaagan. (90 Min)